I-Apple's Fumana isiXhobo sam sokuFumana sele sine-app yovavanyo | Ndisuka mac
Inkampani yaseCupertino isandula ukumilisela isixhobo sovavanyo apho unakho izixhobo zomkhondo, iimveliso kunye nezinto ezinje ngeBluetooth usebenzisa i-app yam yokuKhangela. Oku kuza nephepha mvume elikhethekileyo le-MFi kuvula indlela yezixhobo ezinokubakho ekulandeleleni kwinkampani.
Ewe, sonke sicinga nge-AirTags. Kodwa kufuneka siqhubele phambili ukuba sisicelo sovavanyo kwaye akukho meko ekubhekiswa kuyo kwezi zixhobo esiye sahletyelwa iminyaka. Kule meko, ingxelo yovavanyo yokuqala efana nale yaqaliswa kwi-iOS nakwi-iPadOS 14, ngoku ingxelo yesibini yale nsiza iyeza.
Kufunyenwe ukuba kuhlobo lwe-beta ye-iOS 14.5 bongeze i-tab entsha ebizwa ngokuba "zizinto" kwisicelo esifumana i-My, kulapho unokulandela khona nasiphi na isixhobo esidityaniswe kwi-ID efanayo ne-Fumana eyam. Ngokufanelekileyo, ii-AirTags zika-Apple nazo zingongezwa apha, kodwa okwangoku njengoko sisithi akukho mkhondo konke konke kwaye oku ibonakala ifanelekile kwizincedisi zomntu wesithathu.
Zimbalwa izixhobo ezihambelana ne-Apple's Fumana Yam kwaye le yingxaki ke ukufika kweAirtTag kuya kuba kukuphefumla komoya kwabo basebenzisi abafuna ukuhlala benengxowa, ubhaka, izitshixo, isipaji okanye indawo efanayo. Ngale ndlela, ngexesha lenyanga kaJanuwari imveliso yeBelkin yongeza ukudityaniswa kunye nokufumana kwam, Isandi senkululeko yinyani yentloko engenazingcingo. Ngale ndlela, i-Find My inokusebenza ngokufanayo nezinye izixhobo, ke linyathelo elibalulekileyo lokuba ekugqibeleni bahambelane nale app yeApple.
Ithayile inesixhobo sayo sokufumana izixhobo kodwa kuyafuneka ukuba abanye abasebenzisi basebenzise iithayile ukuze isebenze. Ukuba iApple ivumela ukudityaniswa kwale app nezinye izixhobo iya kuba yimpumelelo yokwenyani, ngaphandle kokumilisela ii-AirTags okanye hayi Nditya kakuhle cacisa kwiiMacRumors.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple's Fumana isiXhobo sam sokuFumana sele sine-app yesilingo